UKUFUNDA NGOKWENZEKAYO NGAPHAMBI KOKUZALA
Uhlelo olubabazekayo lwe-zygote eneseli elilodwa eba wumuntu onamaseli angu 100-trillion mhlawumbe yisehlo esigqame kunazo zonke kwimvelo.
Abaphenyi sebeyazi ukuthi imisebenzi eminingi evamile yomzimba womuntu omdala isunguleka esesesiswini - kusekude azalwe.
Ukukhula ngaphambi kokuzalwa sekuthathwa njengesikhathi sokulungiselela okuthi ngaso umuntu okhulayo athole izakhiwo eziningi, enze namakhono amaningi, okudingeka ekuphileni esezelwe.
Ukukhulelwa kubantu kuba cishe wu 38 amaviki kusukela ekuhlanganeni kwembewu neqanda, kuye ekuzalweni.
Ngamaviki okuqala awu 8 emva kokukhulelwa, umuntu okhulayo kuthiwa wumbungu, okuwukuthi "kukhula ngaphakathi." Le sikhathi, okuthiwa esombungu, sigqame ngokwakheka kweningi lezinhlelo ezisemqoka zomzimba.
Ukusuka emva kwamaviki awu 8 kuya ekubeletheni, "umuntu okhulayo kuthiwa yi-fetus," okuwukuthi "okungakazalwa." Ngale sikhathi, okuthiwa esokungakazalwa, umzimba uyakhula nezinhlelo zawo ziqale ukusebenza.
Bonke ubudala bombungu ne-fetus kulo luhlelo kusho isikhathi kusukela ekukhulelweni.